के तपाइलाइ टन्सिलले सताएको छ ? यसरी घरमै निको पार्नुहोस - The Nepali Video
The Nepali Video
Nepali Infotainment YouTube Channel
के तपाइलाइ टन्सिलले सताएको छ ? यसरी घरमै निको पार्नुहोस
By: The Nepali Video
टन्सिल गलामा हुने एक समस्या हो, जो शारीरमा आयोडिनको कमीले हुन्छ । टन्सिल भएपछि गला सुन्निने र दुख्ने गर्छ । यसले गर्दा खान पिउन गाह्रो हुन्छ । बोल्न पनि सहज हुँदैन । टन्सिललाई वेवास्ता गरियो भने यसले जटिलता निम्त्याउँछ । यद्यपी घरेलु विधीबाट समेत यसको निदान खोज्न सकिन्छ ।
संक्रमणको कारण टन्सिल हुन्छ । हुन त टन्सिल आफैमा खतरानाक समस्या होइन, यद्यपी यसको उपचार गरिएन भने धेरै दुख दिन सक्छ । उचित उपचारबाट यसबाट चाडै छुटकारा पाउन सकिन्छ । निम्न कारणले टन्सिल हुनसक्छ ।
– चिसोको कारण
-पेटको समस्या, जस्तो कि ग्याष्ट्रिक, कब्जियत
– तिख्खर स्वादको वा मसलेदार खानाले
– पाचनयन्त्र कमजोर हुँदा
– चिसो र तातो खानेकुरा एकसाथ सेवन गर्दा
-चिसो चिज जस्तो कि, आइस क्रिम, कोल्ड ड्रिंक धेरै खानाले
कस्तो हुन्छ लक्षण ?
-गलामा पीडा हुनु
– थुक निल्न गाह्रो हुनु । कुनैपनि खानेकुरा निल्न गाह्रो हुनु
– कान र गलाको मुनीको भागमा पीडा हुनु
– दुखाईको कारण ज्वरो आउन सक्छ
सामन्यत टन्सिलको समस्या केहि दिनको उपचारपछि आफै ठिक हुन्छ । तातो पानी पिउने, नुन मिसाइएको तातो पानीले कुल्ला गर्ने प्रक्रियाबाट पनि यसमा राहात मिल्छ । यद्यपी कतिपय अवस्थामा यो सहजै निको हुँदैन । बरु, जटिल बन्दै जान्छ ।
एलोपेथिक उपचार के छ ?
यदि भाइरल इन्फेक्सनको कारण टन्सिल भएको हो भने र ज्वरो पनि आएको छ भने चिकित्सकले तपाईलाई प्यारासिटामोल वा क्रोसिन नामको औषधी दिन सक्छन् । यस औषधीसँगै थोरै नुन मिसाइएको मनतातो पानीले कुल्ला गर्ने सल्लाह पनि दिइन्छ ।
यदि ब्याक्टेरियल संक्रमणको कारण यस्तो समस्या भएको छ भने केहि एन्टिबायोटिक औषधीसँगै प्यारासिटामोल पनि दिइन्छ । एलोपेथिक औषधी प्रयोग गर्नुअघि चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
यस्तो छ घरेलु उपचार विधी
– गाईको शुद्ध घिउले मसाज गर्नुपर्छ, टन्सिलमा राहात मिल्छ ।
-तातो पानीमा लसुनलाई मिहिनसँग पिसेर हाल्ने । यसले केहि दिन मुख कुल्ला गर्नुपर्छ ।
– हर्बल चिया पनि टन्सिलको उपचारको राम्रो उपाय हो । ग्रीन टि, ल्वाङ–सुकुमेल र दालचिनिीको चिया पिउन सकिन्छ ।
-टन्सिलको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि गाजरको जुस पनि उपयोगी हुन्छ ।
-नुन मिसाइएको चियाको सेवनले टन्सिलमा राहात मिल्छ ।
-एक चम्चा बेसार तातो दुधमा राखेर पिउनुपर्छ ।
-कागती र महको मिश्रण तातो पानीमा मिसाएर सेवन गर्नुपर्छ ।
– चिसो दुध सेवन नगरौं
-कोल्ड ड्रिंक पिउनुहुन्न
– चिल्लो, चिप्लो, पिरो र मसलेदार खानेकुरा सेवन गर्नु हुन्न
– रक्सी वा नसालु पदार्थ सेवन नगरौं
एक नजर यता पनि
वर्षाको “ए साथी सुन” को छायाङ्कन सकियो
नेपाल वेस्ट म्युजिक अवार्ड २०२१’का उत्कृष्ट पाँचको नाम सार्वजनिक
एकैदिन सुनको भाउ ९ सय रुपैयाँले बढ्यो
धुर्मुस–सुन्तलीको ‘ओई मेरो परान’
रंगहरूको पर्व होली यसपालि कसरी मनाइदै छ ।
आज यि ठाउमा हुदैछ वर्षा , सर्तक रहनुहोला ।।।
© 2020 The Nepali Video